トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Bona ngokusebenzisa ukucushwa iqembu Horukon e wamakhaza pachinko
Igama pachinko ukucushwa iqembu, ngokuvamile ngokuvamile angase emagama langakatayeleki Uma wena pachinko kumnandi, ungatholi usizo lwakho kodwa wathi lokho ukucushwa iqembu ngokwayo akulona. Njengoba kungase kube abantu abaningi ukuthi musa get ayisetshenziswa kakhulu ukuzwa, sizokwenza zichazele incazelo yakho. umshini pachinko nawo, akusebenzi futhi aliyinikezi ugesi. Ngenxa yale njongo, kodwa amandla supply liyadingeka, ngokuvamile ekhaya volts 100.
Nokho, ngoba ugesi umshini pachinko kuyinto 24 volts, futhi babe akukhuthalele njengoba kunjalo, kuyoba intuthu fly fuse. Ukuze ikwazi ukwenza kanjalo, uzodinga transformer ukuguqula voltage.
axhumekile ihlanganiswe kule transformer eyodwa, kuyangijabulisa ukuthi ukucushwa iqembu. Ukulungiselelwa iqembu, kunezinhlobo ezintathu oyinhloko. Ohlangothini-by-side ukumisa nesibalo ukucushwa sekupheleni nguyena kukhona ukucushwa okungajwayelekile. Ukukhomba ukucushwa iqembu, akukho ukukhetha kodwa ukuze abone.
ungenziwa kuphela, ngicabanga ukuthi kungaba umqondo omuhle ukuba zigcina wangena esiqhingini ngokuvamile hit.
Ngo ukumisa iqembu
, njengoba kungenziwa sisuswe hit ngokuhlanganyela iqembu elifanayo nomunye, Ubonakala enjalo ukuthi isiginali uvela conserver ihholo. I Indlela ukuhlonza inombolo ukucushwa kunabo bonke, inombolo yecala ekupheleni platform iyona big hit kwaba inani elifanayo, ayanda namathuba okukhululwa inombolo ukucushwa omncane.
ukuma akekho ngomzuzu, ukutshela, kubonakala kunzima ukuqonda futhi akaligcini ngokugcwele ngaphakathi wamakhaza pachinko. Khona-ke, kuba ohlangothini-by-side ukumisa, kulula ukuqonda ngakho kuqhathaniswa ukucushwa ithuba ekupheleni odlule. Uma
kungani, ngoba babevame abane ohlangothini-by-side namaqembu ezinhlanu, wena jackpot singase sivele nini side by side. Ingahle sizungeze, uzobona uma okwashiwo kuyo leyo ndawo. Uma hit ohlangothini-by-side
eceleni tibheke, it kwandisa amathuba ohlangothini-by-side ukumisa. Ngamanye amazwi, observation kangcono izinombolo etafuleni ukuthi hit jackpot, inombolo encane kunawo wonke Ngokujwayelekile ngaphezulu etafuleni elifanayo, ayanda namathuba okukhululwa inombolo ukucushwa kunani nonke, uma a hit
ohlangothini-by-side is ukushaya bagxila okungukuthi, kubonakala sengathi yokuthi kukhona kungenzeka eliphezulu ohlangothini-by-side ukumisa. Ekugcineni, kuba ukucushwa okungajwayelekile, ukumisa okungajwayelekile kuyinto ngicabanga kakhulu kunzima ukutshela.
esiqhingini kukhona icala ukuba noma ube ibangana kude, futhi asikaze eqenjini efanayo, abantu abaningi awuboni. Esimweni esinjalo, bese uzama ukugcina hit esiqhingini bagxila, kungase kube lula ukuqonda.
ngaphandle ohlangothini-by-side, lapho kubonakala kungenakwenzeka ekucushweni ukuphela yezinto ezinjalo ukuthi kukhona kungenzeka eliphezulu ukucushwa okungajwayelekile. Ngicabanga ukuthi abantu abanawo obaziyo, okuhlanganisa neqiniso lokuthi kukhona izinto ukucushwa iqembu, kodwa, eqinisweni, u isa iqembu esinjalo ayikho.
Ukulungiselelwa iqembu yaziwa, uma Asobere ehlezi ukuma ukucushwa efanayo, kodwa kuthiwa ukuthi ematfuba yokubamba hit the next lingaphezulu, ekucushweni iqembu akuyona uqobo esitolo, yindlela engasetshenziswa cha.
Okokuqala, futhi pachinko eshintsha ngokucophelela, kuba ephephile ukuthi lokhu kuthambekela sekuqalile uphenyo kusukela iphuzu noma ezingabonwayo. ukumisa iqembu okunjalo akuyona ayikho.
Okokuqala, futhi pachinko eshintsha ngokucophelela, kuba ephephile ukuthi lokhu kuthambekela sekuqalile uphenyo kusukela iphuzu noma ezingabonwayo.